SAVA: Tsy hita tabilao ianao eto ry Dada
jeudi, 29 novembre 2018 13:05
Distrika nanjakan'i Hery Rajaonarimampianina ny teto SAVA, tsy hita tabilao ianao ry Dada fa nitsipona akotry latsaky ny 10%.
Marina fa mety vitsy ny isam-bato aty, fa asio ezaka io hanatsaranao ny endrika anaratsian'olona anao hoe tsy tia côtier, fa merina hatrany, tsy adim-poko no tiana resahina, fa misy ratra tsy mbola afaka tamin'ireny 2002 sy 2009 ireny. Mbola mipetraka ilay endrika hoe Bodo hatrany ny mpihira entinao, na ny hira faneva, dia kalokalo hoy zahay avaratra aty.
Hitako ny interview nataonao tao amin'ny Agence Ecofin, nisintona lesona ianao hoy ianao tamin'ny exil tany Afrique Atsimo, izay nahitanao izany ady teo amin'ny mainty sy fotsy izany. Nanantona an'i Zafy Albert ianao hoy ianao hametraka izany fampiraisam-pirenena sy tena fametrahana ny fampandrosoana isaky ny faritra. Mety izay no nanosika anao naka ny zanaka an-tranon'i Zafy, no sud-est rahateo ho mpandrindra ny fampielezan-kevitrao.
Tsara izay, fa mila ezaka be io, fa ataon'ny mpanao gazetin'i Zandry hirahira mihitsy hoe ianao tsy tia olona mainty.
Hevitra ihany ny ahy ity, azonao tsy arahina, fa raha zaho no manoro hevitra dia aza miaraka amin'i Hery Rajonarimampianina hanohana anao, na dia nadresy tany SAVA aza izy, fa ireo poids lourd ao an-tanàna ao, ireo député ao no tsara antoninao. Manana ny toerany lehibe ireo mpandraharaha ao ireo.
Tabatabain'i mpomban'ny zandry ny resaka bois de rose sy vanille any, fa rehefa tena miresaka amindreo mpandraharaha ireo ianao dia hita fa mpandraharaha tena manara-dalàna ireo fa hafa ny tena zava-misy aseho ety ivelany, ary hafa no tena mpanao trafika bois de rose sy famotsiam-bola amin'ny alalan'ny vanille.
Toro-hevitra, aza mampanantena manamboatra io lalàna Ambilobe Vohémar RN5 io, porte malheur hozy zahay avaratra any, efa tsy misy mino an'izany tsony, maro loatra niteny an'izay, fa rehefa lany ianao, aza maro resaka fa avy dia bulldozer sy goudron entina dia amboaro.
Azoko antoka fa azonao 80% SAVA raha mifanaraka tsara amin'ireo tompon-tany ao ianao.